Liverpool oo €69 milyan oo Euro u gaartay weeraryahanka Napoli Insigne (ma laga yeelay dalabkaas mise…?) – Gool FM
Liverpool oo €69 milyan oo Euro u gaartay weeraryahanka Napoli Insigne (ma laga yeelay dalabkaas mise…?)
Haaruun February 5, 2019
(Roma) 05 Feb 2019 Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa xilli ciyaareedkani isku dayaya in uu la soo wareego weeraryahanka kooxda Napoli Lorenzo Insigne, isagoo dalab rasmi ah u gudbiyay maamulka kooxda Talyaaniga ah, hase yeeshee Napoli ayaa u sheegtay in lacagtaasi yar tahay oo haddii ay si dhab ah u doonayaan ay tahay inay lacagtaasi kordhiyaan.
Wargeyska Talyaaniga ka soo baxa ee ‘La Repubblica’ ayaa qoraya in Liverpool ay haatan €69 milyan oo Euro (£61 milyan oo giniga istarliinka ah) u soo bandhigtay wakiilka Insigne ee Mino Raiola.
Wararka ayaa intaa ku daraya in dalabkani la hor dhigay Milkiilaha Napoli Aurelio De Laurentiis, kaasoo sheegay in qiimahani aad u yar yahay, wuxuuna xusay in Insigne ay ku fasixi karaan €148 milyan oo Euro.
Insigne oo 27 jir ah, qandaraaskiisa Napoli-na ku eg yahay 2022 ayaa waxa uu 30 kulan u dheelay xulka Talyaaniga, isagoo xilli ciyaareedka haatan socdana 8 gool u dhaliyay naadigiisa, halka 5 kubbadood oo gool ahaana ku caawiyay saaxiibadiis 19-kii kulan ee ugu dambeeyay Serie A-da.
Liverpool waxa ay 3 dhibcood ku hoggaaminaysaa Horyaalka Ingiriiska iyadoo leh 62 dhibcood, halka kooxda Manchester City oo kaalinta 2-aad ku jirtana ay leedahay 59 dhibcood, waxaana Liverpool ay doonaysaa in ay xoojiso weerarkeeda oo haatan ay ka ciyaaraan Mohamed Salah, Roberto Firmino iyo Sadio Mane.
Waa sidee rikoorka Lionel Messi ee kulamada uu wajahay Real Madrid ka hor kulanka habeen dambe ee El Clasico?
Cristiano Ronaldo oo 34 jirsaday iyo kummanaan taageerayaal ah oo...